XOG:- Yussur Abraar oo soo gaartay Muqdisho iyo warar sheegaya in xil loo magacaabi rabo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Yussur Abraar oo soo gaartay Muqdisho iyo warar sheegaya in xil loo magacaabi rabo
Waxaa saacadihii ugu dambeysay soo baxaayay warar sheegaya in magaalada Muqdisho ay soo gaartay Yussur Aadan Abraar oo ahayd guddoomiyihii hore ee Bankiga dhexe Soomaaliya, kadib markii sida la sheegay madaxda sare ee dalka ay u yeereen, si ay xil ugu magacaabaan.
Yussur Aadan Abraar oo hore u aheyd guddoomiyihii bankiga dhexe Soomaaliya ayaa haatan la sheegayaa inay safka hore kaga jirto mas’uuliyiinta dhawaan xilalka looga magacaabi rabo dalka, inkastoo aanay la ogeyn xilka rasmiga ah ee loo magacaabi doonno.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleeyso xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegaya Yussur Aadan Abraar loo magacaabi doonno mid ka mid ah xilalka hoos ku xusan:-
– Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya
– Guddiga qaranka ee la dagaalanka musuq-maasuqa.
– Guddoomiyaha sare ee bankiga dhexe Soomaaliya, kaas oo ah xilkii ay hore isaga casishay
13-ka bishii September ee sanadka 2013-ka ayay aheyd markii Yussur Aadan Abraar loo magacaabay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, balse muddo bil iyo bar ah kadib ay xilkaasi iska casishay.
Yussur Aadan Abraar ayaa sababta ay xilkaasi isaga casishay ku sheegtay inay jireen musuq baahsan islamarkaana qaab aan sharci aheyn lacago badan oo malaayiin doollar gaaraya loogala baxay qasnadda Bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Arrintaasi ayay ku sheegtay inay u dulqaadan weysay islamarkaana ay iska casishay xilkii markaasi loo magacaabay, waxaana haatan muuqata imaanshiyaheeda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya inay tahay mid ay ku dooneyso in xil looga magacaabo dalka.
Si kastaba ha ahaatee, illaa iyo haatan lama oga xilka rasmiga ah ee loo magacaabi doonno Yussur Aadan Abraar, waxayna imaanshiyaheeda magaalada Muqdisho kusoo beegmaysaa xilli dhawaantaan uu madaxweyne Farmaajo shaaciyay inuu si weyn ula dagaalami doonno musuq-maasuqa baahsan ee ka jira dalka.